Home Wararka Ujeedada gudiga RW Kheyre magacaabay iyo hantida beelo gaar ah oo la...
Ujeedada gudiga RW Kheyre magacaabay iyo hantida beelo gaar ah oo la doonayo in la burburiyo? (Gorfeyn iyo Digniin)
RW Kheyre ayaa maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay gudi uu ugu magac daray Gudiga Badbaadinta iyo soo Celinta Hantida Qaran. Guddigaan ayaa ka kooban 11-xubnood oo sideed ka mid ah ay ka mid yihiin Golaha Wasiirada Somalia.
Sida uu sheegay RW Kheyre Gudigaan ayaa waxay ka shaqeyn doonaan soo celinta Hantida Qaranka iyo meelaha loo baahan yahay in laga billaabo. Talabaadan ayaa ah tilaabo la doonayo in looga aargoosto qabaa’ilo iyo shaqsiyaad uu MW Farmaajo u arko in ay khatar ku yihiin Dowladiisa iyo danihiisa gaarka ah. Waqtiga la magacaabay gudiga ayaa ku soo aadayso iyada oo RW Kheyre ugu goodiyay qaar ka mida mucaaradka dowladda in ay ka “shaleyn doonaan” mucaaradnimadooda. Waxaan shaki ku jirin in magacaabitaanka gudiga uu keeni doono dhiilo colaadeed oo hor leh iyo colaado qabillo oo ku dhisan aargoosi ku tagrifalka awooda dowladda.
Su’aalaha isweydiinta u baahan waxa ay tahay, 1) Maxaa keenay in golaha Wasiiradda kaliya laga soo xulo gudigaan, gaar ahaan wasiirada xulufada la ah Ra’iisal Wasaare Kheyre 2) Halkeey ka bilaanabaysaa baaritaanka iyo isla xisaabtanka? ma afar sano ka hor, ,ma 20 sano ka hor ama 40 sano ka hor. Dowlado kala duwan oo dalka soo mary ayaa si sharci ah u bixyay hantida qaranka ayaga oo u arkayay in ay ku jirto danta qaranka 3) Hantida qaranka ma aha kaliya mid taala magaalada Muqadishu, maxa laga yeelayaa hantida qaran ee hoostimaado Dowlad Goboleedyada? yaa lagala xisaabtamayaa hantidaas? 4) Maxaa sababay in qabaa’iilo iyo degaano gaar ah la eegto iyada oo la iska indha tiraayo qabaa’ilada kale ee iyagana lagu tuhmayo in ay haystaan hanti qaran 5) dacwada dhulka yaa qaadayo? ma dowlada ayaa gudiga magacaabeysa, dacwada qaadayso isla markaana ay xukunka fulin doonto? maxaa keenay in gedi cusub la magacaabo iyada oo baarlamaanka ansaxiyay abuutiraanka gudiga Iibka qaranka oo ujeedada loo sameeyay ay tahay arintaan oo kale.
Qoraalka uu soo saaray RW Kheyre ayaa dhanka kale lagu furay Guddigaan in ay joojiyaan iibinta iyo bixinta dhulalka dowladda, soo tirakoobida Hantida Wasaaradaha.
Waxa cad in la doonayo in la beesadao beelo iyo ganacsato gaar ah kuwaas oo la doonayo in laga aargoosto shaqsiyaadkaas. MW Farmaajo ayaa si uu isaga fogeeyo eeda ka imaan doonto hantida burburinta hantida beelo gaar ah ayaa waxa uu gudiga gudoomiye uga dhigay Cabdulllahi Goodax Barre oo lagu yaqaan xishood iyo anshax la’aan uu ku badasho lacag iyo xil loo magacaabo.